Winches, Camping Yeelanaya, Vehicle Protection, Recovery Qalab - TS xarig culeys lugu koriyo
Doon & Gacan Winches
Accessories xarig culeys lugu koriyo
Saqafka teendhada & Shiraac
Baararka Rear & jiiday Accessories
xirmooyinka Recovery & suumanka
Bow & jilicsan Biro
Godadka & Qalabka qaadayso
Laysan Air godadka
EEG WAXA KALE aan wax u qabaneyno
noo soo bandhigo.
Tools Zhejiang TS xarig culeys lugu koriyo Warshadaha Co., Ltd ayaa ku hawlan wax soo saarka iyo dhoofinta winches kala duwan iyo 4 × 4 accessories muddo ka badan 12 sano. waxaa intooda badan aan ku soo winches ka 2000lbs in 17500lbs, garbihiisa u soo kabashada, kuwan raadkaygay ciid, bar dibi iyo Recovery Qalabka. Waxaan had iyo jeer waa on jidka loo maro horumarinta cusub ee 4 × 4 accessories ee cusub ee baabuurta orodka afar-wheel iyo off-road baabuurta.
Waxaa naga go'an waa in ay bixiso xal baabuurta iyo alaabta qiimaha weyn macaamiisha iyada oo loo marayo wax soo saarka iyo adeeg tayo sare. Dhisidda xiriir isku halleeya oo dhan wada-hawlgalayaasha ganacsiga by "tayo sare & qiimo macquul ah".
Ku soo dhawow noo ama OEM booqo ka our warshad. waqti kasta oo aad u baahan tahay gacan ama aad qabto su'aal ku saabsan mid ka mid ah waxyaabaha our, waxaan kaa caawin kara in aad go'aan ka marsho ugu wanaagsan ee baahidaada.
GEAR KABASHADA 4x4
Winch CUSUB 12000 / 13500lbs biyaha biyuhu ...
Rakibida wiishka wiishka / majarafad / kabashada ...
Sida loogu xiro wiishka gaarigaaga
Wax aan ka baqno, waxaan ku guuleysan doonnaa dagaalka NCP!
Jindong Industrial Area, Jinhua City, Zhejiang, Shiinaha
Us Haddaba Wac: 13085656052
xarig culeys lugu koriyo gaari, xarig culeys lugu koriyo 4x4, Xarig dardaro Waayo, xarig culeys lugu koriyo, xarig culeys lugu koriyo korontada, SUV xarig culeys lugu koriyo, Recovery xarig culeys lugu koriyo,